Indlela Yomsebenzi Wemoto Yesikolo SeBarake Calipers Work
Njengomoto olawulayo oqhelekileyo, imoto yakho inezinto ezimbalwa ezisisiseko: qhubela phambili nangemva, jikela ngakwesobunxele nesekunene, kwaye uyeke. Ewe, ukuyeka i-ton-plus-car imoto kudinga okungaphezulu nje kokumisa i-throttle, kwaye ukuyihlahlela ngokutsha kunokusonakalisa ukuhanjiswa. Isithuthi senqwelo yemoto yakho sifikile kwindlela ende ukusuka eBertha Benz , umfazi kaKarl Benz, waqulunqa iimfake ze-brake ngo-1886.
Kukho iintlobo ezimbini zeendlela zokuxoka: i-disc brakes kunye ne- drum brakes . I-drum bherki yi-teknoloji ekhulile, ingenamandla okanye ayisebenzayo, kodwa isetyenziswe kwezinye izicelo ngenxa yokuba ixabiso elincinci ukuvelisa kwaye lihle kakhulu kumabhuleki angemuva kwizithuthi ezininzi. Iibhuleki zedivaysi ubuchwepheshe obutsha, bubhetele kunokuba ibhondi ibhebhe ngeendlela zonke, kodwa ixabisa kakhulu ukuvelisa nokugcina.
Yintoni i-Brake Caliper?
Yiyiphi i-Brake Caliper, Njalo na ?. http://www.gettyimages.com/license/172252488
Inkqubo yokunqumla i-diski yenziwe ngamacandelo ambalwa asisiseko, kuquka i-caliper ye-freake, i-rotor ye-freake, i-freake ipads, kunye ne-shims ehlukeneyo, imithombo kunye nezicatshulwa zokubamba iimfestile. I- rotor ye-freake , okanye i-disc brake, iphakama phakathi kwevili kunye ne-axle hub, ejikelezayo kunye ne-axle kunye nevili. I-caliper ye-brake igxininiswe kwinqanaba lokuhamba okanye ukuxinwa. Ukuphosa i-rotor, i-caliper ye-brake inganciphisa isivini sesondo ukuya kwisantya solawulo okanye ukumiswa, oko kukuthi, zero-ngaphezulu kule ngcaciso ngomzuzu.
Abaqaphi bamabhayiseza bangena kwiintlobo ezibini eziphambili, abakhonkcekileyo abaqhaqhaqhayo kunye nabakhonkceli bentambo. Amakhonkco ahlambulukileyo ahlambulukileyo aqhutywe ngqo kwi-knuckle kwaye zonke izinto ezihambayo zingaphakathi. Ngaphakathi kwinqanaba le-caliper eliqingqiweyo, amabini amabini amabini e-pistons axinzelele iipakethe ze-freake , ezifakela izikhonkwane, ukusuka kumacala amabini. Amakhonkco enqabileyo ahlambulukanga awanamathe ngqo kwi-knuckle, kodwa "kwi-cage." Iqhekeza ithwala iiplanga eziqhelekileyo, ngokuqhelekileyo zihamba ngee-rails, kunye ne-sleeve caliper slides phezu kwazo, zikhutshwe ngamabhotshi. Ngaphakathi kwecaliper floating floating enye okanye ezimbini pistons kwicala langaphakathi.
I-Brake Calipers isebenza njani?
Isicatshulwa esisisiseko somsebenzi weBrace Caliper. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradraulic_disc_brake_diagram.gif
Kwizona zixhobo ezisisiseko, abaqhekezayo abaqhekezayo zixhobo zokusebenza zokuphindaphinda. Isinyathelo kwi-pedal pedal kunye ne-piston encinci iphoxisa i-brake fluid kwi- master cylinder . Ngenxa yokuba umbane we-brake awuxinezeli, le nto idluliselwa ngokukhawuleza kwi-caliperers. Ngaphakathi kwe-caliper ye-brake, iipiston ezinkulu zandisa amandla amakhulu, ukuqhubezela i-pake ye-freake kwi-rotor ye-freake.
Kwimeko yesikhephe sokuqhawula, i-pistons icindezela kumacala amabini. Kwimeko yeentambo zokuqhaqhafaza, i-piston igxotha kuqala kwi-freed pad, igxotha i-caliper kude ne-rotor, ibangele i-pad bharkey yokudibanisa ukudibanisa ne-rotor. Iisaldidi ze-caliper zivumela le ntshukumo.
Iibhayiseli zeBrake zihluleka njani?
Isilayidi seBracking Caliper okanye iPadake ye-Brake ibenokukhokelela ekugqweleni ngokukhawuleza. http://www.gettyimages.com/license/184974687
Iimpawu zokunqanda ezihlambulukileyo zibiza kakhulu, kodwa zisebenza kakuhle kwaye zithembeke, ngelixa iindawo ezinamanzi ezinqabileyo zithengeleka ngokwaneleyo ukuba zikhuphe iindleko zokuvelisa eziphantsi. Sekunjalo, ukubetha abaqhekezayo bangaphumeleli ngeendlela ezimbalwa. Nazi ezinye zezinto eziqhelekileyo zokungaphumeleli kunye neendlela zokuzilungisa.
I-Stuck Caliper Slider: Kwi-caliperers, i-caliper sliders idibanisa incinci kwaye ibangela iingxaki ezininzi. Ukugqoka ngokukhawuleza kwi-pad yangaphakathi kubonakala ngokwaneleyo, kodwa isilayidi sokunamathela iyanciphisa ingxaki. Ukuba i-saliper slider ayikwazi ukuhamba ngokukhululekile, inokubangela ukugqithisa ngaphezulu kwi-pad yangaphakathi, ukudonsa kwi-outboard pad, okanye ukunciphisa ukusebenza kwe-braking. Ukuba omnye wabadibanisi uyabambelela, oku kungakhokelela kwintlungu ye-pedal ye-freake pedal, njengoko i-caliper flexes ye-brake izama ukudibanisa ngokupheleleyo ne-rotor.
Cocisa i-caliper slides kunye ne-drill okanye i-brush ye-wire kunye ne-lubricate nge-silicone grease enzima. Yenza indawo ebomileyo okanye iinqabhoko eziqhekekileyo ukukhusela ukungena kwamanzi kunye nokuhlambulula.
I-Piston ehambayo ephumayo: Kwi-caliperers edibeneyo okanye ejikelezayo, nganye ipiston inesalathisi yerabha yesikwere, ephethe uxinzelelo lwe-brake kwaye idonsa i-piston emva kokukhishwa. Ibhobho yangaphandle yerabha igcina amanzi kunye nothuli ngaphandle kwepiston. Ngenxa yobudala okanye iinkqubo ezifakekileyo zokufakela, izibhothi ezinothuliweyo zingavumela amanzi kunye nothuli ukuba kube yipiston, ukukhawuleza ukubola. Ukuba isitywina se-piston sidlulela kule ndawo, kuya kusonakalisa kwaye kuvuza.
Khangela ukuba izibhothi zothuli zivalwe, zilungele kwaye zomile. Ungasebenzisi i-silicone grease kule ndawo, njengoko ingahambelani ne-brake fluid. Ukuba ukwakhiwa kwakhona kweentambo zokuqhawula, qiniseka ukuba uhlawulela iibhotile ze-piston, uhlambulule kwaye umise yonke into, utshintshe zonke iimpawu, ufake zonke iibhothi. Sebenzisa i-freake fluid entsha ukuze uhlambulule iimpawu zokufakela.
Ukubamba iPadake Pad: Kukho izicwangciso eziqinileyo phakathi kwepake ze-brake kunye nokugcina i-hardware. Oku kugcina izinto zingabonakali kwaye zenze isandi. Ukunciphisa iifayili kwenza kwakhona ukuqhuma okungakumbi. Ngokuhamba kwexesha, ukubola kunganciphisa le mvume, kubangela ukuba ipakethi yokurhaxa idibanise okanye ifake. I-pad yokumisa ibhondi ingadonsa kwi-rotor ye-freke okanye ingashenxisi ukubandakanya i-rotor, ekhokelela ekugqibeleni ukuguquka, ukugqithisa, kunye nokuqhekeka okungenakusebenza. I-pad yokubhaduza ibhondi inokulinganisa isilayidi esinyeneyo ngendlela evakalelwa ngayo kwaye yenza ngayo.
Xa uqokelela amabheki , qinisekisa ukucoca yonke i-corrosion kunye nokuqhelisa uthuli kunye ne-buildup. Musa ukulibala ukuhlambulula emva kweziqholo kunye nemithombo. Inani elincinci lokulwa nelokukhusela liza kukhusela imilambo kunye nezikhonkwane ekuqhenqeni, nangona ipeyinti iya kuba yindlela engcono.
Nangona kuphela okubandakanya iindawo ezimbalwa zeemoto zakho, abaqhekezayo abaqhekezayo ngenye yezona zinto zibaluleke kakhulu, ezenza ukuba kubekho ukulungiswa okulawulwayo kwiimeko ezifaniyo. Ukwazi indlela abasebenza ngayo nendlela abahamba ngayo kukukunceda wenze izigqibo ezinolwazi malunga nokugcinwa nokulungiswa kwazo, nokuba udibana nochwepheshe okanye uzenzayo. Xa kuziwa ukuwaphula ama-calipers, qhosela njalo yonke into, kwaye uqaphele izandi ezingavamile ngaphambi kokuba zenze imeko engaphephile.
I-Prius Battery Drain ichazwe
Iprojekthi yePalati yeFaux egcinwe ngeGlasi: iKadinali kunye neMagnolia